नेपालका उत्कृष्ट ५ महिला अधिकृतहरु जसको नाम सुन्ने बितिक्कै अपराधिको मुटु हल्लिन्छ : को को हुन ? - Sudur Khabar
प्रकाशित मिति : ३० असार २०७५, शनिबार १४:४०
कुन नेपाल प्रहरीमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत सख्या महिलाको छ । नेपालमा अहिले ७५ हजार ८ सय ४४ प्रहरी दरबन्दी छ । जसमध्ये ५ हजार ६ सय ९५ जना महिला प्रहरी छन् । यो संख्या जम्मा प्रहरी दरबन्ददिको ७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै हो ।
त्यसमा पनि प्रहरी सेवामा महिलाहरु प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) सम्म मात्रै पुगेका छन् । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रहरी बरिष्ट उपरिक्षक (एसएसपी) मा २ जना महिला प्रहरी कार्यरत छन् । महानगरिय प्रहरी प्रधान कार्यालय रानीपोखरीमा पुजासिंह र कुकुर विद्यालयमा डा. देवती गुरुङ कार्यरत छिन् ।
नेपाल प्रहरी अस्पतालमा दरबन्दी रहेका डा. दुर्गा थापा र डा. आशा सिंह बहालवाला डीआइजी हुन् । यसअघि विमला थापा र पार्वती थापाले डीआइजीबाटै अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।नेपाल प्रहरी अस्पतालमा एसपीहरु डा. संजिता दाहाल, डा. दिपा नुछे प्रधान, डा. दिल कुमारी गुरुङ, डा. सावित्र जंगम र डा. छाया देवी गुरुङ कार्यरत छन् ।
यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालय मावनअधिकार इकाईमा गांगा पन्त एसपीको रुपमा कार्यरत छिन् भने तारादेवी थापा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिस्ठानमा एसपीकै रुपमा कार्यरत छिन् ।